Otu esi eji igwe ịgbado ọkụ butt manual
Akwụkwọ ntuziaka na -agbaze agbaze butt dị mma maka ịgbado ọkụ butt nke PE, PP, ọkpọkọ PVDF na ọkpọkọ, ọkpọkọ na ihe ndozi na oghere, enwere ike iji ya na ogbako. Ọ mejupụtara akụkụ anọ: etiti, igwe ihe ncha, efere kpo oku nke nọọrọ onwe ya, onye na -egwe ọka egwe ọka na efere efere kpo oku ...
Nlezi anya na nchọpụta nsogbu maka igwe eji arụ ọrụ ọkpọkọ na-agbaze agbaze ọkụ
site na nchịkwa na 21-09-27
Ngwongwo anwụrụ ọkụ ọhụrụ ma ọ bụ ogologo oge na-adịte aka na-ebelata oke mkpuchi n'etiti windings, windings na casing n'ihi mmiri. Ọ na-adịkarị mkpụmkpụ ma na-agbada na mbido ojiji, na-ebute akụrụngwa na ihe ọghọm ...
HDPE Hydraulic Butt Fusion Welding Machine Ngwọta nsogbu
Ọdịda igwe ịgbado ọkụ butt hydraulic butt na -agụnyekarị azịza ndị a na ihe ndị metụtara ya: Mmehie 1. Mgbe ịtinyechara, moto nke ọdụ ụgbọ mmiri ahụ na -atụgharị wee nụ ụda na -eme mkpọtụ, mana mkpanaka mkpanaka hydraulic agaghị agagharị; Ngwọta: buru ụzọ lelee ma mmanụ hydraulic dị na ...
Kedu otu esi edozi igwe mgbaze ọkụ na -ajụkarị?
Nsogbu ndị a na-ahụkarị na nchọpụta nsogbu nke ọkpọkọ na-agbaze agbaze ọkụ na-arụ ọrụ: maka igwe ịgbado ọkụ ọhụrụ ma ọ bụ nke a na-ejighị ya na ọkpọkọ na-agbaze ngwa ngwa welder, nkwụsi ike dị n'etiti nkwụgide winding na n'etiti nkwụsị winding na shei na-ebelata nke ukwuu. .
Kedu ihe e ji amata igwe ịgbado ọkụ butt butt?
Igwe na -agbaze ọkụ na -agbaze ọkụ na -akpaghị aka zuru oke nwere njirimara ndị a: 1. Ndobe ka mma (ịgbado ọkụ) maka ọkpọkọ nwere dayameta dị iche iche, SDR na ihe edobere tupu (họrọ dayameta, ihe na akara nọmba). 2. Igwe ịgbado ọkụ na -akpachapụ anya dr ...
Kedu otu esi ejikwa igwe ịgbado ọkụ electrofusion?
Ụdị nke ngwakọta ọkụ eletriki, eriri na -ewe iwe ọkụ, igwe ịgbado ọkụ electrothermal na ngwaahịa ndị ọzọ dị iche. A na -ere ngwaahịa anyị ebe niile. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla, biko kpọtụrụ anyị. Ka anyị mụta gbasara nsogbu nkịtị nke igwe ọkụ ọkụ ọkụ ngwaahịa Ngwaahịa m ...
Nsogbu ndị dị a shouldaa ka a ga -a attentiona ntị na ya mgbe ịzụrụ igwe ihe?
Enwere ọtụtụ nkọwa ị kwesịrị ị attentiona ntị na mgbe ịzụrụ igwe na-egbu ọtụtụ akụkụ, n'ihi na naanị ị attentiona ntị na nkọwa nwere ike hụ na ngwaahịa ikpeazụ azụtara nwere ezigbo arụmọrụ na ngwa ahụ. Yabụ kedu nsogbu ekwesịrị ị attentiona ntị na mgbe ịzụrụ ịkpụ akụkụ dị iche iche ...
Otu esi ejikwa njikwa anwụrụ PE na -agbaze agbaze ọkụ?
N'ime usoro ịgbado ọkụ nke ọkpọkọ PE, ọ dị mkpa ijikwa njikwa ya nke ọma, rụọ ọrụ nchịkwa maka ndị na-arụ ọrụ, akụrụngwa, ihe ịgbado ọkụ na usoro ịgbado ọkụ, dabere na ọrụ nnwale, ma gbalịsie ike belata mgbawa mgbawa na mgbawa. Ugbu a, ChinaR ...
Kedu ihe kpatara ịgbado ọkụ ọkụ ọkụ PE ọkpọkọ nwere nkwarụ
1.Analysis nke ntụpọ ịgbado ọkụ nke Pee anwụrụ ọkụ gbazere welder A na -etinye igwe anwụrụ ọkụ na -agbaze ọkụ na ntinye nke ọrụ netwọkụ ọkpọkọ. Dayameta nke ọkpọkọ ọkọnọ mmiri karịrị 63mm na ọkpụrụkpụ mgbidi karịrị 5mm. Na usoro nke ịgbado ọkụ dị otú ahụ ...
Kedu ihe kpatara igwe eji agbakọ ọnụ igwe dabara ọnụ ahịa dị iche iche?
Mgbe ọnụahịa nke onye na -ebipụta ọtụtụ akụkụ nọ na nsogbu, ọ na -egosi na ọnụahịa na -agbanwe mgbe niile. Yabụ kedu ihe na -emetụta ọnụahịa ahụ, nke a bụ ajụjụ a. Ojiji ihe: Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ nwunye ...
Ịkwado ọkpọkọ ọ na -esiri ike?
site na nchịkwa na 21-06-11
Ọ nwere onye chere na ịgbado ọkụ butt butt a na -arụsi ọrụ ike. Ịmalite na -esiri ndị ọrụ na -anaghị agbado ọkụ na mbụ ike, mana ị nwere ike ịgbaso ntuziaka ma ọ bụ vidiyo ka ịmụta ka esi eme. Tupu ịgbado ọkụ kwesịrị ịma mana ...
Onye zụtara igwe ịgbado ọkụ butt na Day Labour 2021
Nke a bụ onye ahịa si South America, akụkọ anyị na -amalite na Septemba 2020. Ha chọrọ otu igwe ịgbado ọkụ hdpe pipe na -arụ ọrụ na sistemụ mmiri, yana nnukwu dayameta nke hdpe 315mm, ma rụọkwa obere obere ọkpọkọ. Ha na -asụ Spanish, mana anyị na -asụ chinese, yabụ anyị na -ekwurịta okwu site na ntụgharị na s ...